သင်ဒီမှာရှိပါတယ်: နေအိမ် facial ကုသမှု မှောင်မိုက်မျက်စိများအတွက်မိတ်ကပ်.
အလင်းပျော့အသားအရေပါလျှင်, အသံ, မျက်နှာမှလျှောက်ထားသဘာဝအရိပ်ရှိသင့်, ကောင်းစွာသင့်လျော် Beige သို့မဟုတ် pinkish-အဝါနုရောင်ရှိသောအရောင်အရိပ်. ခက်တာကမှန်ကန်သောပုံသဏ္ဌာန်နှင့်အရောင် tinted ခွံမာသီးခဲတံဖြစ်ရမည်. အဝါနုရောင်ရှိသောအရိပ်၏အစေးကိုသုံးအရိပ်အဖြစ်. မျက်စိအလျားလိုက်အပေါက်၏ပြင်ပထောင့်တူညီသောအရိပ်အလေးပေး, ဒါပေမယ့်အမှောင်ထဲမှာသေံ. Eyeliner နဲ့ mascara မှောင်မိုက်အညိုရောင်အဆင်းအရောင်နှင့်အရိပ်ကိုအသုံးပြု.
အရေပြားမှောင်မိုက်ခြင်းနှင့် velvety ဖြစ်တယ်ဆိုရင်, လိမ္မော်ရောင်-အညိုရောင်အဆင်းအရောင်ကိုအသုံးပြုခြင်း. မှောင်မိုက်အရိပ်မက်မွန်နှင့်လိမ္မော်ရောင်အရောင်တန်ချိန်အသုံးပြုသော, အနက်ရောင်မှင်လျှောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်. Blusher နှင့်နှုတ်ခမ်းနီအရောင်အလားတူအကွာအဝေးအတွင်းကျင်းပလျက်ရှိသည်.
မှောင်မိုက်မျက်စိလောက်မရှိတဲ့ကံကောင်းပိုင်ရှင်များ. ဤအချက်ကိုပထမဦးဆုံးဌာန၌ကိုယ်နှိုက်ဖို့အာရုံကိုဆွဲယူ. မှောင်မိုက်မျက်စိနှင့်အလှအပနှင့်မျှမတို့လုပ်-Up အများကြီးတောက်ပနှင့်အပြာရောင်မျက်လုံးများနှင့်ဆံပင်ရွှေရောင်ကြည့်. အမှောင်-eyed အလှအပသာအနည်းငယ်လေဖြတ်ကသူ၏အမြင်၏သဘာဝ Play အလေးပေးဖို့လုံလောက်ပါတယ်. သတိရ, ထို အညိုရောင်မျက်လုံးများအဘို့အညနပေိုငျးလုပ်-up, ကြောင်းကနေကွဲပြားခြားနားသော.
eyeliner. တစ်ဦး Arabic အဘိဓါန်စတိုင်မိတ်ကပ်များအတွက်စံပြ. အရှေ့တိုင်းစတိုင်မိတ်ကပ်အထက်မျက်ခွံအပေါ်အများဆုံး cilia အတွက် eyeliner လျှောက်ထားသက်ဆိုင်, နှင့်အောက်ပိုင်းတိတစ်လျှောက်ပိန်လိုင်း. အနက်ရောင် – eyeliner များအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှု. Finish အရှေ့တိုင်းအလှအပ smear ၏ပုံရိပ်ကိုသံလွင်၏အရိပ်ဖြစ်ကြ၏ထိ, ညိုသော, ရှေ. မှောင်မိုက်မျက်စိများအတွက်မိတ်ကပ်အတွက်ပြောင်းရွှေ့တဖြည်းဖြည်းဖြစ်သင့်, အထက်မျက်ခွံပေါ်မှာတည်ရှိအတွင်းထောင့်မှာအလင်းအရိပ်ထဲကနေ, မှောင်မိုက်ဖို့အကြံပေးချက်များမှာပြင်ပမျက်ခမ်းအပေါ်မှာပြည့်နှက်.
အရိပ်. သူတို့ကမှောင်မိုက်တဲ့မျက်စိအဘို့ဒီဇိုင်းထုတ်နေကြပါတယ်, အဆိုပါ created တောက်ပနေမိတ်ကပ်နဲ့မှောင်မိုက်တဲ့မျက်စိတိမ်အနက်အတွက်အလေးပေးဖို့, သဘာဝအားဖြင့်လှူဒါန်းခဲ့. သူတို့တစ်တွေနည်းနည်း Tweak လိုအမှောင်ထဲမှာမျက်စိများ၏အသွင်သဏ္ဌာန်ကိုအလေးပေး. သံလွင်အညိုရောင် palette မှောင်မိုက်မျက်စိအဘို့သင့်လျော်သည်. အရေပြားနွေးလျှင်ကြောင်းသေချာပါစေ, ခပ်မည်းမည်းအရောင်. အဓိကအရာက overdo မှမဟုတ်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်သာသူတို့ရဲ့အလှအပအလေးပေးပြောကြားဖို့မျက်စိ၏အပြင်ဘက်ထောင့်အပေါ်အနည်းငယ်သပ်သပ်ရပ်ရပ်ထိသုံးပြီး. အရေပြားတစ်အစိမ်းရောင်ရှိသော Ting တရုတ်နှင့်အတူချောချောမွေ့မွေ့နဲ့တောက်ပတဲ့သည်ဆိုပါက, သောမိတ်ကပ်တောက်ပအအေးအရောင်ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်နိုင်သည်: ပြာသော, အဏ္ဏဝါအရိပ်. ယင်းကိုကြည့်ခြင်းနှင့်အဝတ်အစားများနှင့်လုပ်-up,, မှောင်မိုက်မျက်စိများ၏အချိုးအာရုံစိုက်သင့်တယ်: အဝတ်အစား, pomade, ဆံပင်အရောင်.
မင်. ဆံပင်အလင်းအညိုရောင်သို့မဟုတ်ကောက်ရိုးအရောင်နိုင်လျှင်, အညိုရောင် mascara အသုံးပြုမှုအတွက်အသင့်တော်ဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်လိမ့်မည်. သို့သော်တောက်ပတဲ့အနက်ရောင်ဆံရှင်မစုံလင်သော mascara အနက်ရောင်. မှောင်မိုက်မျက်စိနှင့်မှောင်မိုက်ဆံပင်ပိုင်ရှင်များသလား, ယေဘုယျအားဖြင့်, သဘာဝအားဖြင့်၎င်း, ထူသောမျက်တောင်. သပ်သပ်ရပ်ရပ်နဲ့သပ်ရပ် mascara လေဖြတ်သုံးပြီးအနက်ရောင်ဆံရှင်မမှောင်မိုက်မျက်စိများအတွက်မိတ်ကပ်, သာ cilia cilium ဖြင့်ခွဲခြားရည်မှန်း. အဆိုပါမှင်ခင်မှာအနည်းငယ်အမှုန့်ကြိမ်ဒဏ်, သူတို့ကိုခွဲခြားရန်.
မှောင်မိုက်မျက်စိများအတွက်သိကောင်းစရာ – မိတ်ကပ်ကအရမ်းသတိထားရပါမည်. အမှောင်မျက်စိတိုးမြှင့်အာရုံစိုက်မှုများ၏အရာဝတ္ထု. ထို့ကြောင့်အကြီးအအာရုံကိုဆွဲဆောင်, နှင့်မိတ်ကပ်အဘို့အဆင်းအရောင်အဓိကရုဏ်းများလွန်း oversaturated, မှောင်မိုက်မျက်စိပွဲတော်အရုပ်အတွက်အမျိုးသမီးကိုဖွင့်. အရေးကြီးမှတ်ချက် основные правила нанесения макияжа.